7 sababood oo loo isticmaalo VPN-ka Android | Androidsis
Qaar badan ayaa ah dadka waqti kadib go'aansaday inay adeegsadaan VPN. Waad ku mahadsan tahay jiritaanka iyaga, waxaad ka heli kartaa shabakad kombuyuutar si aad ugu hesho ballaarin aamin ah shabakadda. Tani waxay ku mahadsan tahay isku xirnaanta dhibic-ku-xirnaanta ee isku xirnaanta xiriirka iyo sirta.
Doorashada VPN waxay u baahan tahay waqti yar, maadaama kuwa bilaashka ah ay caddeeyeen inaysan faa'iido u lahayn isticmaalayaasha isticmaala. Way ku habboon tahay in la helo mid lacag la siiyay si uu ammaan u ahaado markii la safrayo, isticmaal aaladaha socodka ama iska ilaali geoblocks.
Mid ka mid ah kuwa sii xoogeysanayay sanadihii la soo dhaafay waa NordVPN, tayo tayo leh VPN qiimo jaban iyo waxqabad dhab ah oo muuqda inta soo hartay. Waxay ku habboon tahay barnaamijyada sida Netflix, HBO, Disney + iyo adeegyo kale oo badan oo qulqulaya oo maanta la heli karo.
Mid ka mid ah sababaha waaweyn ee loo adeegsado NordVPN waa qaybta amniga, awood u lahaanshaha marin-u-helka degello ay horay u jireen xaddidyo, sida marka la isku dayayo in laga helo waxyaabaha ka socda Netflix gobollada kale. VPN waa lagama maarmaan haddii aad rabto inaad gasho boggaga si badbaado leh adigoon wax u dhimayn xogtaada.
Waxaa jira afar nooc oo VPN ah, tan koowaad waa marinka fog ee laga heli karo VPN, kan labaadna waa dhibic-u-dhibic VPN, kan saddexaadna waa tunnel, kan afraadna waa VPN ka sarreeya WAN. Midka ugu dambeeya ayaa ugu yar faafitaanka, laakiin waa ikhtiyaar dhab ah, inkasta oo ay taasi jiraan saddexda hore ayaa ansax ah.
2 Ka helitaanka Netflix gobollada kala duwan
5 Madal badan
6 Adeegga macaamiisha
Waxa ugu horreeya uguna muhiimsan marka la isticmaalayo NordVPN waa amniga, Server-ku ma isticmaalaan disk adag, gaar ahaan wuxuu adeegsadaa RAM. Waxba lama keydiyo, server-yada la dhigo waa kuwo iyaga u gaar ah waxayna u shaqeyn doonaan sidii tunnel marka ay galayaan bogagga iyo adeegyada.
Sirta ay isticmaasho waa AES-256, waa mid ka mid ah algorithms-ka encryption-ka ugu aaminka badan maanta. Sida laga soo xigtay khubarada, hadda macquul maahan in la jabiyoIn kasta oo ISP-yada ama haakariyeyaasha midkoodna awood u yeelan doonin inuu akhriyo, xitaa haddii ay awoodaan inay dhexda ka galaan. AES-256 waa nidaam sir xayeysiis ah oo loo aqoonsaday heerka sirta ee dawlada Mareykanka.
Ka helitaanka Netflix gobollada kala duwan
Xayiraad-goosadku waa mid kale oo ka mid ah awooda NordVPN. Tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad ka hesho waxyaabaha ka socda Mareykanka, waa inaad ku xirnaataa server waddankaas jooga. Kuwo badan ayaa ah taxanaha la heli karo ka hor intaan la turjumin oo la gelin Netflix Spain.
Tallaabooyinka lagu fulinayo tan way fududahay, tan awgeed waa lagama maarmaan in la soo dejiyo arjiga, loo diiwaangeliyo adeegga, lagu xiro server-ka Mareykanka, laga galo Netflix waana intaas. Lagula xidhiidhi karo dhulal kaleTusaale ahaan, waxa ku jira Boqortooyada Midowday (United Kingdom) waa mid ka mid ah taariikhihii ugu dambeeyay ee lala tashanayay.
Qodob kale oo lagu qiimeeyo markaad isticmaaleyso VPN waa xawaare, oo leh NordVPN xawaaraha ugu dhaqsaha badan suuqa waa la damaanad qaaday. Si tan loo sameeyo, waxaa lagama maarmaan ah in la doorto adeege dammaanad qaadaya xawaaraha waxqabadka sare, waxaa lagama maarmaan ah in la tuuro server-yada buuxa ee waayo-aragnimada ugu fiican leh. NordVPN waa mid ka mid ah VPN-yada ugu dhaqsaha badan suuqa, dhammaantood markay marayaan falanqaynta kala duwan ee shirkadda Jarmalka AVTEST.
VPN ugu dhaqsaha badan ayaa ah midka cusbooneysiiya adeegeyaasheeda, sidaas darteed dammaanadda xawaaraha waa dammaanad ah inaad awood u yeelatid inaad daawan kartid wax kasta oo ka mid ah waxyaabaha aan lahayn googoyn ama joogsi. Tan NordVPN ayaa ka horreysa tartankeeda oo waxaad awoodi doontaa inaad si toos ah u aragto fiidiyoow dhib la'aan.
Halkan guji oo hel NordVPN dalab waqti-xaddidan oo ah 72% dhimis iyo 3 bilood oo hadiyad ah oo keliya € 2.64 bishiiba.
Hirgelinta NordLynx ayaa kadhigtay VPN la heli karo xiriirka ultrafast iyo dammaanad qaadka asturnaanta boggaga uu adeegsadaha adeegsaduhu adeegsado. Waa lafdhabarta WireGuard, jiilka soo socda ee xalka tunnel VPN ee sifiican uga soo qabtay Linux, Windows, Android, iOS iyo macOS tan iyo markii la hirgaliyay.
NordLynx wuu ka dhakhso badan yahay, dhammaan waa ku mahadsan tahay sannado badan oo uu la shaqeynayay WireGuard, oo ah borotokool leh qiyaastii 4000 oo xariiq oo koodh ah, oo qiyaastii 100 jeer ka yar borotokoolka kale. Way fududahay in la hirgeliyo, marka lagu daro bixinta adeeg hubaal ah waxqabadka oo ku habboon helitaanka VPN.
NordVPN wuxuu u boodboodiyey dhammaan melaha si loo siiyo oo loo bixiyo mid kasta oo ka mid ah isticmaaleyaasheeda khibrad isku mid ah, ha ahaato daalacasho ama cabbitaan qulqulka, iyo waxyaabo kale oo badan. Waxaa laga heli karaa macruufka, Android, Windows, Mac Os, Linux iyo Android TV nidaamyada hawlgalka.
Diiwaangelinta, waxaa jira 6 qalab oo ku raaxeysan kara amniga daweynta NordVPN, qarinaya cinwaanka IP-ga iyo sirta taraafikada. Tani way fududahay sida aad ula soo gasho arjiga oo aad ugu xirto internetka. walwal la'aan markaad marin u hesho bilaa IP-ga shirkadda aad xiriirka la leedahay.
Mid ka mid ah qodobbada muhiimka ah ee shirkaddu waa inuu noqdaa adeegga macaamiisha. Badanaa waxaa lagu xaliyaa su'aalaha badanaa la isweydiiyo iyo shakiga, in kasta oo NordVPN ay leedahay adeeg macmiil oo 24-saac ah, 7 maalmood usbuucii, si loo xalliyo wixii shaki ah ee ka dhalan kara waqtigaas.
Taageerada waxaa loo sameeyaa seddex siyaabood, tan hore waa iyadoo la booqdo Xarunta Caawinta, tan labaadna iyadoo si toos ah loola sheekeysto xirfadle ka socda shirkadda iyo tan saddexaad oo ah in la diro emayl. Saddexda midkoodba wuu ansax yahay, kan labaad oo ah midka ugu isticmaalka badan isticmaalayaasha.
Adeeg loo adeegsan karo xad la'aan wuxuu leeyahay qiime aad u hooseeya, marka lagu daro bixinta amniga, xawaaraha oo ku habboon qalab kasta maanta. In ka yar 10 euro waxaad heysataa adeeg bil ah, helitaanka 72% qiimo dhimis hadaad kireysato qorshaha labada sano hada iyo helitaanka hadiyad 3 bilood bilaash ah.
Haddii aad eegto qalabka 6 ee galaangal u yeelanaya barxadda, waa qiimo aad u hooseeya tan iyo markii ay suurtagal tahay in lagu xiro in ka badan 5.500 oo server. Intaa waxaa dheer, NordVPN sidoo kale waxay bixisaa adeeg daruur ah inaad geliso feylal isla markaana aad u xafidato, dhammaantoodna ay ku jiraan xog qarinta qiimaheedu waa 2.64 bishii.
Marka ha iloobin amnigaaga internetka iyo asturnaantaada: guji halkan oo hel dalab-waqti kooban: NordVPN oo ah qiimo dhimis 72% iyo 3 bilood oo bilaash ah oo keliya 2.64 XNUMX bishiiba.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » 7 sababood oo loo adeegsado VPN on Android
11-ka codsi ee ugu wanaagsan ee lagu aqoonsado eyda